Migumisiro yezvipfuyo | Green Renewables
Mombe dzinogona kudzikisa gasi inokanganisa kupisa ne30%
Iwo pachawo anomiririra chinenge chikamu chimwe muzvitanhatu choutsi hwe gasi rinodziya. Mombe dzinoburitsa 7,1 gigatoni dze CO2 zvakaenzana pagore mumhepo, ndiko kuti, 15% yezvose zvinobuditsa COXNUMX. zvakabva anthropic.
Asi sekureva kweshumo nyowani kubva kuOrganisheni ye Marudzi Kubatana yeChikafu neKurima (FAO) yakaburitswa China rapfuura, Gunyana 26, zvinokwanisika kudzikisa izvi ne30% chisi, uchishandisa zvakanakisa maitiro uye teknolojia zviripo.
El kudzidza, yakanyanyisa kupedzisa inoitwa panhau iyi kusvika nhasi, yaongorora matanho ese ehupenyu kutenderera kwe kuchengeta mombe: kugadzirwa uye kutakurwa kwekudya kwemhuka, kushandiswa kwesimba papurazi, mweya kubva kugaya uye kuvirisa yemanyowa, pamwe nekutakura, firiji uye mamiriro e zvigadzirwa mhuka mushure mekuzvibayira.
Iwo manyuko makuru e chisi: kugadzirwa uye shanduko yefuru (45%), kunyanya nekuda kweiyo mafetiraiza makemikari inoshandiswa muzvirimwa, kugayiwa kwemhuka (39%), sezvo mhou dzichiburitsa methane, gasi rine simba zvakapetwa ka25 pane CO2, uye kuora kwe mupfudze (10%). Zvimwe zvacho zvinokonzerwa nekushandurwa uye kutakurwa kweiyo zvigadzirwa mhuka.
Mamwe mashoko - Hunhu hunopinda munguva yechikwereti chezvisikwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Ecology » Kurima kwezvakatipoteredza » Mombe dzinogona kudzikisa gasi inokanganisa kupisa ne30%
Iyo stratosphere inokanganisa zvakananga mamiriro ekunze ePasi
Zvakanakira organic kotoni